लेबुल दायरा परिभाषित गर्नुहोस्
लेबुल दायराहरू परिभाषित गर्नुहोस्
संवाद खोल्नुहोस् जसलाई तपाईँं लेबुल दायरामा परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ
लेबुल दायराको कक्ष सामग्रीहरू नामहरूको रूपमा LibreOfficeमा प्रयोग गर्न सकिन्छ तिनीहरूले नामहरू उही आचरणमा सङठित गर्न् जसमा यसले हप्तादिनहरू र महिनाहरूको पूर्वपरिभाषित नामहरूको काम गर्दछ । जब सूत्रमा टाइप गरिन्छ ती नामहरूले स्वचालित रूपमा नै पूरा हुन्छन् । थपमा, लेबुल दायराद्वारा परिभाषित नामहरू स्वाचालित रूपमा उत्पादित नामहरूद्वारा परिभाषित नामहरूको प्राथमिकतामा पर्ने छन् ।.
तपाईँं लेबुल दायराहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ जसले फरक पानाहरूमा उही लेबुलहरू समाहित गर्दछ ।LibreOffice ले पहिला हालको पानाको लेबुल दायराहरू र दिएका असफल खोज, अरू पानाहरूको दायराहरू खोज्छ ।
प्रत्येक लेबुल दायराको कक्ष सन्दर्भ प्रदर्शन गर्दछ । यस क्रममा सूची बाकसबाट लेबुल दायराहरू हटाउन लाई यसलाई मेट्नुहोस् चयन गरेर क्लिक गर्नुहोस् ।
सङ्कुचित गर्नु॒होस/अधिकतम बनाउनुहोस
Click the Shrink आगत फाँटको साइजमा संवाद घटाउन प्रतिमा. यो पानामा आवश्यक सन्दर्भ चिन्ह लगाउन भन्दा सजिलो छ.प्रतिमाहरू Maximize प्रतिमामा स्वचालितरूपले रूपान्तरण हुन्छन. यसको मौलिक आकारमा संवाद पूर्वावस्थामा राख्न क्लिक गर्नुहोस.
तपाईँंले माउसद्वारा पानामा क्लिक गर्ना साथ संवाद स्वत: न्यून हुन्छ। तपाईँंले माउस बटन हटाउनासाथ,संवाद पूर्वावस्थामा आउछ र कागजातमा माउसद्वारा परिभाषित सन्दर्भ दायरा निलो फ्रेमद्वारा हाइलाइट हुन्छ।
स्तम्भ लेबुलहरू समाविष्ट गर्दछ
हालको लेबुल दायरामा स्तम्भ लेबुलहरू संलग्न गर्नुहोस् ।
पङ्क्ति लेबुलहरू समाहित गर्नुहोस् ।
हालको लेबुल दायरामा पङ्क्ति लेबुलहरू संलग्न गर्दछ ।
डेटा दायराका लागि
डेटा दायरा सेट गर्दछ जसका लागि चयनगरेको लेबुल दायरा वैध हुन्छ । यसलाई परिमार्जन गर्न पानामा क्लिक गर्नु होस् र माउस सहितको अर्को दायरा चयन गर्नु होस् ।
सूचीमा हालको लेबुल दायरा थप्दछ ।
ले चयन गरिएका तत्व वा पुष्टि भएपछि तत्वहरू मेट्दछ।
Title is: लेबुल दायरा परिभाषित गर्नुहोस्